5 Ajuju ịjụ gị Search Engine Optimization ndụmọdụ | Martech Zone
5 Ajuju ịjụ gị Search Engine Optimization ndụmọdụ
Satọde, Febụwarị 18, 2017 Satọde, Febụwarị 18, 2017 Douglas Karr
Onye ahịa anyị mepụtara kwa afọ infographic atụmatụ n'ihi na ọ nọ n'ọfịs anyị n'izu a. Dị ka ọtụtụ ụlọ ọrụ achụmnta ego, ha agabigalarị na-enwe ihe ọjọọ SEO ọkachamara na ugbu a goro a SEO ọhụrụ ụlọ ọrụ na-enyere ha aka idozi mmebi ahụ.
Ma mmebi mebiri. Ihe bu isi ihe ojoo SEO ojoo na-eme na backlinking na plethora nke saịtị di egwu. Ugbu a onye ahịa ahụ na-akpọtụrụ saịtị ọ bụla iji wepu njikọ ndị ahụ, ma ọ bụ na-ajụ ha site na Google Search Console. Site na azụmahịa, nke a bụ ọnọdụ kacha njọ. Onye ahịa a ga-akwụ ndị ndụmọdụ abụọ ụgwọ, ma ugbu a, ọghọm furu efu yana azụmaahịa metụtara ya. Ego furu efu batara ndị asọmpi ha.
Kedu ihe kpatara SEO Industry Industry ji alụ ọgụ
Algọridim Google na-aga n'ihu na-abawanye na ọkaibe na ikike ha lekwasịrị anya na hazie nsonaazụ dabere na ngwaọrụ, ọnọdụ, na omume onye ọrụ. N'ụzọ dị mwute, ọtụtụ ndị na-ahụ maka ndụmọdụ na ụlọ ọrụ SEO etinyela ego na usoro site na afọ ole na ole gara aga nke na-adịkwaghị mkpa. Ha wuru ndi oru, tinye ego na ngwa oru, ma kuziere onwe ha usoro di iche iche nke abughi ihe mgbe ochie kama ha gha etinye ndi ahia ihe ize ndụ ma oburu na ejiri ha taa.
Enwere otutu hubris na ụlọ ọrụ SEO. Ọ na-esiri m ike ikwenye na ndị ndụmọdụ ole na ole, ma ọ bụ ebe nchọta kachasị amasị, ma ọ bụ ọbụna ụlọ ọrụ niile nwere ikike ịpụ ọtụtụ ijeri dollar nke Google na-etinye na mmelite algorithms ha mgbe niile.
Enwere naanị igodo atọ maka SEO nke oge a
Edemede a nwere ike iwe ụfọdụ ndị ụlọ ọrụ anyị na-agba mbọ iduga, mana achọrọ m ịma. Ike gwụrụ m ịhụ ndị ahịa ka ha na-atụtụkọta ego ndị ahụ ma were ego ha chọrọ iji wepụta usoro ihe eji arụ ọrụ nke ọma. Enwere naanị mkpịsị ugodi ọ bụla na atụmatụ SEO ọ bụla kachasị elu:
Kwụsị Iledo Ndụmọdụ Nchọgharị Nchọgharị - Ngwa nyocha ọ bụla na-enye anyị ezigbo ego maka anyị iji hụ na anyị anaghị emebi usoro ojiji ha na ịgbaso usoro kachasị mma ha. O doro anya, oge ụfọdụ ndụmọdụ ahụ edoghị anya ma na-ahapụkarị oghere - mana nke ahụ apụtaghị na onye ndụmọdụ SEO kwesịrị ịkwalite oke. Emela. Ihe na-arụ ọrụ taa nke na-emegide ndụmọdụ ha nwere ike lie ebe nrụọrụ weebụ na-esote izu dị ka algorithm na-achọta oghere ahụ ma taa ya ahụhụ.
Kwụsị imchọcha Ihe Injin Mepụta ma Bido Na-achọ Ọrụ Ndị Ọrụ Njin - Ọ bụrụ n ’ịzụlite atụmatụ ọ bụla nke enweghị usoro izizi nke ndị ahịa, ị na-emerụ onwe gị ahụ. Ngwunye ọchụchọ na-achọsi nnukwu ahụmịhe maka ndị ọrụ njin ọchụchọ. Nke a apụtaghị na ụfọdụ akụkụ ọrụ aka nke ọchụchọ iji nyere aka na-ekwukọrịta na igwe nchọta ihe ma nweta nzaghachi n'aka ha…
Mepụta, Ugbu a, ma bulie Ọdịnaya Dị arkrịba Ama - Gara bụ ụbọchị nke ọdịnaya mmepụta ka ndepụta Nri Google enweghi ike ntukwasi. Companylọ ọrụ ọ bụla gbagoro ma mee ka usoro mgbakọ nke ọdịnaya dị mkpụmkpụ gbalịsie ike itinye aka na njikọta isiokwu ndị ọzọ. Lọ ọrụ ndị a leghaara asọmpi ahụ anya ma leghara omume nke ndị ọbịa ha anya na nsogbu ha. Ọ bụrụ n'ịchọrọ imeri n'ọkwa, ị ga - emeri na ịmepụta ọdịnaya kachasị mma na isiokwu ọ bụla, na - eweta ya na usoro kachasị mma, ma na - akwalite ya iji hụ na ọ ruru ndị na - ege ntị ga - ekekọrịta ya - n'ikpeazụ na-eto eto ya na engines ọchụchọ.
Kedu Ajụjụ I Kwesịrị Askjụ Onye Ndụmọdụ SEO Gị?
N’iburu nke a n’uche, ị ga-enwerịrị ike ị belata ajụjụ ị na-ajụ onye ndụmọdụ SEO gị iji hụ na ha tozuru oke ma na-arụ ọrụ kachasị mma nke ụlọ ọrụ gị. Onye nyocha njikarịcha nchọta gị ga-arụ ọrụ iji hụ na ị nwere akụrụngwa magburu onwe ya, ghọta nnweta gị, nurturing, na njigide usoro, ma soro gị rụọ ọrụ ogologo oge gị niile iji mee ka arụmọrụ nke njikarịcha ihe dịkwuo elu.
Ị ga detuo mgbalị niile ị na etinye n'ọrụ ọchụchọ anyị n'uju - gụnyere ụbọchị, ọrụ, ngwa ọrụ, na ebumnuche nke mbọ ahụ? Ndị ọkachamara SEO na-arụ ọrụ dị ukwuu na-ahụ n'anya ịkụziri ndị ahịa ha mgbalị ọ bụla. Ha maara na akụrụngwa ahụ abụghị isi ihe, ọ bụ ihe ha maara banyere injin nchọ nke onye ahịa na-akwụ ụgwọ. Ngwá ọrụ dịka Search Search Console dị mkpa - mana atụmatụ ejiri ya na data bụ ihe dị oke egwu. A transperent SEO ndụmọdụ bụ nnukwu SEO ọkachamara, ebe ị na-arụ ọrụ zuru ezu na mgbalị ahụ.
Olee otu i si ekpebi ebe mgbalị SEO anyị Kwesịrị itinye? Nke a bụ ajụjụ kwesịrị ịkpalite ajụjụ. Onye ndụmọdụ SEO gị kwesịrị inwe ezigbo mmasị na azụmaahịa gị, ụlọ ọrụ gị, asọmpi gị, yana ọdịiche gị. Onye na-ahụ maka SEO nke na-aga ma mepụta ndepụta nke isiokwu na-enyocha ọkwa ha, ma ị na-agbanye ọdịnaya na ha na-enweghị nghọta azụmahịa gị bụ ihe na-atụ egwu. Anyị na-amalite ntinye aka SEO ọ bụla na nghọta ka anyị si dabaa na atụmatụ niile. Anyị chọrọ ịma akụkụ niile nke azụmahịa ha iji hụ na anyị na-emepe atụmatụ pụrụ iche nke na-ebute nsonaazụ ụlọ ọrụ chọrọ, ọ bụghị ihe anyị -eche ha nwere ike ịchọ.
You nwere ike ịkọwa akụkụ nke mgbalị gị na ihe ị ga - enyere anyị aka iji teknụzụ rụọ ọrụ? E nwere ụfọdụ ntọala dị mkpa iji gosipụta ọdịnaya gị na engines ọchụchọ - gụnyere robots.txt, sitemaps, saịtị hierarchy, redirects, HTML construction, accelerated mobile pages, rich snippets, etc. E nwekwara nnukwu ihe dịka ọsọ ọsọ, caching, na Nzaghachi ngwaọrụ nke ga - enyere aka - ọ bụghị naanị site na ọchụchọ kama yana mmekọrịta onye ọrụ.
Olee otú ị tụọ ihe ịga nke ọma nke SEO gị mgbalị? Ọ bụrụ na onye ndụmọdụ SEO kwuru na okporo ụzọ ahịhịa na isiokwu isiokwu bụ etu ha si atụ, ị nwere ike inwe nsogbu. Onye na-ahụ maka SEO gị kwesịrị ịtụle ihe ịga nke ọma gị site na azụmaahịa ị na-emepụta site na okporo ụzọ. Oge. Inwe oke ogo na enweghị mmụba a na - enweghị atụ na nsonaazụ azụmaahịa bụ n'efu. N'ezie, ọ bụrụ na ebumnuche gị bụ ogo… ị nwere ike chọọ icheghachi echiche gị n'onwe gị.
Ị nwere ego nkwa azụ? Onye ndụmọdụ SEO enweghị ike ijikwa akụkụ niile nke usoro ịre ahịa inbound gị niile. Onye ndụmọdụ SEO nwere ike ịme ihe niile n'ụzọ ziri ezi, ma ị ka nwere ike ịnọrọ n'azụ ndị asọmpi nwere nnukwu akụ, nnukwu ndị na-ege ntị, na ahịa zuru oke. Agbanyeghị, ọ bụrụ na idafu ogo dị ukwuu nke okporo ụzọ ọchụchọ na ogo gị n'ihi na ha dubara gị n'ime atụmatụ dị egwu, ha kwesịrị ịdị njikere ịkwụghachi otu akụkụ nke mbọ ha. Ma ọ bụrụ na ha mee ka ị nweta ntaramahụhụ site na igwe nyocha site na omume ha, ha kwesịrị ịdị njikere ịkwụghachi ego gị. You're ga-achọ ya.
Na nkenke, ị kwesịrị inwe obi abụọ banyere onye ndụmọdụ SEO ọ bụla nke na-enweghị ezigbo mmasị gị n'obi, enweghị ikike ịzụ ahịa zuru oke, ọ bụghị nghọta banyere mbọ ha na-etinye. Onye ndụmọdụ gị kwesịrị ịkụziri gị ihe mgbe niile; ị kwesịrị ị na-eche ihe ha na-eme ma ọ bụ ihe mere gị organic pụta na-agbanwe mgbe ha na-eme.
Mgbe inwere Obi Abụọ
Anyị na otu nnukwu ụlọ ọrụ na-enweghị ihe na-erughị iri dị iche iche SEO ndụmọdụ na-arụ ọrụ na ha. Site na ngwụcha nke njikọ ahụ, e nwere naanị mmadụ abụọ n'ime anyị. Anyị abụọ dụrụ ọdụ megide ọtụtụ ndị ndụmọdụ nwere ndị ahịa ya Ịgba Cha Cha usoro - na mgbe hama dara (o wee daa) - anyị nọ ebe ahụ iji kpochapụ ihe ndozi.
Onye ndụmọdụ SEO gị kwesịrị ịnabata echiche nke abụọ site na ndị ọgbọ ụlọ ọrụ. Anyị emeela nyocha dị uchu maka nnukwu ụlọ ọrụ iji nyochaa ma chọpụta ma ndị ọrụ SEO ha na-ebuga usoro ojii. O di nwute, na oru obula ha di. Ọ bụrụ n’inyo gị enyo, o nwere ike ịbụ na ị nwere nsogbu.
Tags: nwalee seoblackhat seo usoroorganicsearch engineusoro nyocha engineAahụ siri ikeseo nchọpụta
Ndi Social Media na-amanye ndị ahịa ịpụ site na Mass Media?
Eserese eserese eserese nke na-agbagha mgbe niile
Emmerey Rose (@EmmereyEm)
Feb 21, 2017 n’elekere 11:13 nke abali
Hey Douglas! Atụmatụ dị ukwuu! Ọ na-amasị m ọkachasị mgbe ị sịrị “Kwụsị ịchọọ Njikwa Nchọgharị ma bido Optchọcha Ndị Ọrụ Injin Inyocha“. Naanị ị kwụgidere na ịkọwa etu SEO si arụ ọrụ taa. Anọ m na-eche, agbanyeghị, ị na-akwado obere ụlọ ọrụ iji were onye ndụmọdụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ SEO?